Home Wararka Drones nooca ciidamada oo Muqdisho lagu qabtay & Xildhibaan taageera Farmaajo oo...
Drones nooca ciidamada oo Muqdisho lagu qabtay & Xildhibaan taageera Farmaajo oo sheegtay.
Ciidamada Nabad-Sugidda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde toddobaadkii tegay ku qabtay diyaarado Drones ah, kuwaas oo ay la wareegeen, sida ay Ilo wareedyo ka tirsan xafiiska RW Rooble u sheegeen MOL.
Diyaaradaha ayaa waxaa sidoo kale la socday oo lala qabtay laba farsamo-yaqaan oo u dhashay dalka Turkiga, kuwaasi oo qorshuhu ahaa inay diyaaradaha xirxiraan, kadibna howl-geliyaan.
Labada qof ee Turkish-ka ayaa lasii daayey kadib markii ay soo faro-gelisay safaaradda Turkiga, oo dalbatay in la fasaxo haddii aan lagu hayn caddeymo dambi ay galeen.
Sawirada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee MOL aay heshay ayaa muujinaya in aay yihiin nooca loogu talo galay basaasnimada, laguna xiro karo gantoolo wax ka dila meel fog.
Xogta aan helnay ayaa intaas ku dareysa in diyaaradaha uu sheegtay inuu leeyahay xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, oo ku dooday inuu u keensaday inuu u adeegsado inay waraabiyaan beero ku yaalla Puntland. Zakariye oo ka mid taageerayaasha Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa loo badinayaa in uu u ceeb qarinaayo Villa Somalia oo diyaaradahaan aay ugu deeqday Dowladda Turkiga.
Hoos ka arag sawirrada diyaaradaha la qabtay.